सीआरएम मूल्य निर्धारण हेर्नुहोस् - Salesforce को शक्ति 80% कम लागतमा पाउनुहोस्
अहिले सुरू गर्नुहोस्, पछि प्लान लिनुहोस्
सबै सुविधाहरूको साथ 14 दिनको लागि कम्पनी हब नि: शुल्क प्रयास गर्नुहोस्। कुनै क्रेडिट कार्ड आवश्यक छैन।
वार्षिक रूपमा बिल मासिक रूपमा बिल
10 + प्रयोगकर्ताहरू? अनुकूलन मूल्य प्राप्त गर्नुहोस्
$ 12 / प्रयोगकर्ता प्रति महिना
रु। 850 / प्रयोगकर्ता प्रति महिना
वार्षिक रूपमा बिल (33 बचत गर्दछ)
$ 18 / प्रयोगकर्ता प्रति महिना
रु। 1275 / प्रयोगकर्ता प्रति महिना
मासिक रूपमा बिल
(33 सेव% वार्षिक योजना संग)
एकाधिक सौ पाइपलाइनहरू
2 - इ-मेल सिङ्क
असीमित इमेल ट्र्याकिङ, जीमेलबाट पनि
ईमेल समय तालिका
जवाफ नदिनुहोस् यदि कुनै जवाफ छैन
कसले कुन क्षेत्रहरू हेर्न सक्छ नियन्त्रण गर्नुहोस्
अनुप्रयोगहरूको 100 हरूसँग एकीकृत गर्नुहोस्
$ 27 / प्रयोगकर्ता प्रति महिना
रु। 1925 / प्रयोगकर्ता प्रति महिना
ड्यासबोर्ड र 20 + मानक रिपोर्टहरू
कस्टम रिपोर्टहरू, कस्टम क्षेत्रहरूमा पनि
विभिन्न प्रकारका चार्टहरू
रिपोर्टहरू निर्यात गर्नुहोस्
हरिद्वार डेटाको दृश्यता
$ 24 / प्रयोगकर्ता प्रति महिना
रु। 1500 / प्रयोगकर्ता प्रति महिना
$ 36 / प्रयोगकर्ता प्रति महिना
रु। 2484 / प्रयोगकर्ता प्रति महिना
आफ्नो कार्यप्रवाह स्वचालित बनाउनुहोस्
अनुसूचित अलर्ट / कार्यहरू
थोक परिवर्तनहरू / कार्यहरू
कुनै पनि व्यवसाय प्रक्रिया स्वचालित गर्न स्वचालित लग (कुनै कोड बिना!) सिर्जना गर्नुहोस्
स्वचालित मेल / चेतावनीहरू
स्वचालित रूपमा कार्यहरू / अन्य रेकर्डहरू सिर्जना गर्नुहोस्
$ 33 / प्रयोगकर्ता प्रति महिना
रु। 2277 / प्रयोगकर्ता प्रति महिना
$ 49 / प्रयोगकर्ता प्रति महिना
रु। 3380 / प्रयोगकर्ता प्रति महिना
तपाईंको उद्योगको लागि उन्नत अनुकूलन
अन्य प्रक्रियाहरू व्यवस्थित गर्न अनुकूल अनुप्रयोगहरू
अनुकूलन तालिकाहरूमा रिपोर्टिङ र स्वचालन
1 मा व्यावसायिक खोज उद्धरणहरू सिर्जना गर्नुहोस्
अनुकूलन उद्धरण टेम्प्लेट
सेल्स अर्डर र सूची
क्षेत्र प्रबंधन / नियम आधारित डेटा दृश्यता
अहिले तपाईंको नि: शुल्क परीक्षण सुरू गर्नुहोस्
14 दिन नि: शुल्क परीक्षण। कुनै क्रेडिट कार्ड आवश्यक छैन।
मैले कम्पनी को चयन गर्नु पर्छ हब?
तपाईंको उद्योगको लागि पूर्ण अनुकूलन
CompanyHub एसएमएसहरूको लागि सबैभन्दा अनुकूलन CRM हरू हो। साधारण ड्र्याग ड्रपको साथ तपाईले निम्न गर्न सक्नुहुनेछ:
फिल्डहरू, स्तम्भहरू, फिल्टरहरू अनुकूलन गर्नुहोस्।
कस्टम तालिकाहरू जस्तै भुक्तानी, पाठ्यक्रमहरू, गुण आदिसँग कुनै पनि ट्रयाक र व्यवस्थित गर्नुहोस्।
सबै कुरा जोड्नुहोस् र 360 डिग्री दृश्य प्राप्त गर्नुहोस्।
रिपोर्टहरूसँग केहि पनि विश्लेषण गर्नुहोस्
UTrons - ड्र्याग-ड्रपको साथ आफ्नो कार्यप्रवाह स्वत: गर्नुहोस्
CompanyHub को UTrons लाई तपाईले कुनै पनि प्रक्रियालाई स्वचालित रूपमा एक प्रवाह चार्ट बनाएर अनुमति दिन्छ। Eg:
डुप्लिकेटहरूलाई अस्वीकार गर्नुहोस्
चरण परिवर्तनहरू व्यवहार गर्दा कार्य सिर्जना गर्नुहोस्
कम्पनी सिर्जना हुँदा स्वचालित रूपमा सम्झौता सिर्जना गर्नुहोस्
स्वचालित रूपमा सौन्दर्यहरू नवीकरण गर्नुहोस्
स्वचालित रूपमा जन्मदिन मेलहरू / मेलहरूको मिति / मिति मिति अनुस्मारकहरू पठाउनुहोस्
एक्सेल CRM को रूपमा सजिलो
तपाईंको टोलीले वास्तवमा प्रयोग गर्नेछ
एक्सेल जस्तो कि तपाईंले एकल पृष्ठबाट धेरै चीजहरू गर्न अनुमति दिन्छ जस्तो - लेगहरू सिर्जना गर्नुहोस्, कक्षहरू सम्पादन गर्नुहोस्, मेल पठाउनुहोस्, टिप्पणी / कार्य / कुराकानी थप गर्नुहोस्।
सुरक्षा - पूर्णतया कसले नियन्त्रण गर्न सक्छ
कुन डेटा हेर्नुहोस्
तपाइँ सजिलै नियन्त्रण गर्न सक्नुहुन्छ जुन कुन रेकर्ड र कुन क्षेत्रहरू हेर्न सक्नुहुन्छ।
कन्जर्जर तह समर्थन
हाम्रो समर्थन टोली G100Crowd मा 2% मूल्याङ्कन गरिएको छ किनभने हामी सधैँ हाम्रा ग्राहकहरूलाई मद्दत गर्न थप माइल जान्छौं।
जटिलता र लागत बिना उद्यम सीआरएमको शक्ति पाउनुहोस्।
अझै पनि प्रश्नहरू पाउनुभयो?
किन तपाईंबाट खरिद गर्नुहुन्छ? के तपाईलाई यति विशेष बनाउनुहुन्छ?
हामी 8 + वर्षको लागि सीआरएम स्पेसमा काम गरिरहेका छौं। यसले हामीलाई विभिन्न कम्पनीहरूको आवश्यकताको बुझाइ दिएको छ। हामीले आफ्नै बिक्री टोलीहरूको लागि धेरै सीआरएमहरू प्रयोग गरेका छौं। यसले हामीलाई यो थाहा पाएको छ कि अधिकतर सीआरएमहरू पनि मौलिक वा धेरै जटिल छन्। साथै, तिनीहरू ईमेल ट्रयाकिङ जस्ता रिपोर्टिङ जस्ता उपकरणहरू छन्, रिपोर्टिङ आदि। फ्रस्ट गरिएका, हामीले आफैंलाई निर्माण गर्ने निर्णय गरे। हामी पनि एक अत्यन्त डिजाइन डिजाइन कम्पनी हो जुन, हामी एक सजिलो अझै सम्म साँच्चै शक्तिशाली सीआरएम निर्माण गर्न सक्षम थिए जसले कम्पनीहरु बढ्छ।
मैले वास्तवमा यसबाट कुन परिणाम प्राप्त गर्नेछु?
CompanyHub ले तपाईंलाई3तरिकामा मद्दत गर्नेछ। 1। तपाईं सजिलै संग आफ्नो नेतृत्व को पोषण गर्न र अधिक सुरू कन्वर्ट गर्न सक्षम हुनेछ। यसरी तपाईंको बिक्री बढ्दैछ। 2। यसले तपाईंको टोलीको उत्पादकता बढाउनेछ। तपाईंको एजेन्टले धेरै घण्टा बचत गर्न सक्छ र बिक्रीमा फोकस गर्न प्रयोग गर्दछ। 3। तपाईंले पूर्ण दृश्यता पाउनुहुनेछ। तपाईं सबै नेतृत्व, तिनीहरूका कुराकानीहरू, केन्द्रित स्थानमा सौदाहरू ट्रयाक गर्न सक्षम हुनुहुनेछ। साथै तपाइँ शक्तिशाली रिपोर्टिंगको साथ केहि पनि विश्लेषण गर्न सक्नुहुन्छ। त्यसैले तपाईं आफ्नो व्यवसाय बढाउन सबै चीज प्राप्त गर्नुहुन्छ।
त्यहाँ कुनै लामो अवधि ठेकेहरू छन्?
हामी धेरै विश्वस्त छौं कि CompanyHub केही दिन भित्र यसको मूल्यको औचित्य दिनेछ। यसकारण हामीले कुनै लामो अवधि अनुबंधहरू राख्नुहुन्न र तपाईं महिना-देखि-महिना योजनाहरूको लागी अप्ट इन गर्न सक्नुहुन्छ। तपाईं howerver, अतिरिक्त छूट प्राप्त गर्न वार्षिक रूपमा भुक्तानी गर्न सक्नुहुन्छ।
प्रशिक्षण कलमा के समावेश छ?
प्रशिक्षण कलमा, हाम्रो सीआरएम परामर्शदाता मध्ये एक आपसमा पुग्छ र उनीहरुका आवश्यकताहरु बुझ्दछन्। आवश्यकताहरू बुझ्न पछि तिनीहरूले तपाईंको CompanyHub CRM खाताबाट बाहिर निकाल्न तपाईंलाई मार्गदर्शन गर्नेछ। तपाईंको आवश्यकता अनुसार तपाईं डेमो पाउनुहुनेछ। तपाइँ डेमोमा आफ्नो टीम पनि समावेश गर्न सक्नुहुन्छ।
म यो मेरो टीममा प्रस्तुत गर्दछु?
तपाइँ सीधा आफ्नो टीमलाई तपाइँको कम्पनी हब खातामा निमन्त्रणा गर्न सक्नुहुन्छ ताकि तिनीहरू यसको प्रयोग गर्न सक्नुहुनेछ। CompanyHub प्रयोग गर्न सजिलो छ र हामी निश्चित हुनुहुन्छ कि तपाईंको टीम दिन 1 बाट प्रयोग सुरु हुनेछ। तथापि कुनै पनि प्रश्नहरूको बेलामा, तपाइँ / तपाइँको टोलीले हाम्रो समर्थन टोलीको साथ सम्पर्कमा लिन सक्दछ र उनीहरूले तपाईंलाई मार्गदर्शन गर्न सक्छन्।
के तपाईं GDPR अनुपालन हुनुहुन्छ?
हामी त्यहाँ त्यहाँ जंगली वेब बाहिर जान्छौं र हामी सबै ग्राहकको जानकारीको लागि CompanyHub मा भरोसा गर्न हाम्रो ग्राहकको छनौट मान्दछौं। यस CompanyHub लाई पालन गर्न पूर्णरूपमा GDPR अनुपालन हो।
मेरो डेटा कति सुरक्षित छ?
डेटा सुरक्षा केहि छ जुन हामी कम्पनी हबमा धेरै गम्भीरतापूर्वक लिन्छौँ। वास्तवमा हामी तपाईंलाई उद्यम स्तर5तह सुरक्षा प्रदान गर्दछौं: 1। प्रत्येक क्लाइन्ट2को लागि अलग डेटाबेस। एसएसएसएल जस्तै बैंक3प्रयोग गरेर डेटा स्थान्तरण सुरक्षित गर्नुहोस्। AWS सर्भरहरू, मुख्य साइटहरू4द्वारा प्रयोग गरिएको। रेकर्ड स्तर सुरक्षा 5। क्षेत्र स्तर सुरक्षा।
बल्क इमेल पठाउँदा जसको इमेल ठेगाना प्रयोग गरिनेछ?
मार्केट इमेलहरूको विपरीत हामी बल्क ईमेलहरू पठाउँछौं (तपाईंको एउटा एक) को लागी तपाईंको आफ्नै इमेल ठेगाना र सर्भर प्रयोग गर्दछौं। त्यसैले तपाईंको इमेलको संभावना तपाईंको सम्भावनाको प्राथमिक इनबक्समा जान्छ धेरै अधिक छ।
मैले कम्पनी हब प्रयोग गरेर कति इमेलहरू पठाउन सक्छु?
अधिक ईमेल प्रदायकहरू दैनिक सीमा, जुन प्रायः 100 हरूमा छ। मेलहरू पठाउनका लागि कृपया तपाइँको प्रदायकको दैनिक सीमा जाँच गर्नुहोस्। CompanyHub प्रति दिन 1000 सम्म अनुमति दिन्छ।
मेरो डेटा कहाँ होस्ट गरिएको छ?
हामी AWS सर्भरहरू प्रयोग गर्दछौं, जुन सबैभन्दा प्रमुख साइटहरूद्वारा पनि प्रयोग गरिन्छ।
के यो अन्य प्रणालीसँग मेल खान्छ?
Zapier, PieSync र API जस्ता विभिन्न एकीकरण विकल्पहरूको साथ, CompanyHub सबै लोकप्रिय अनुप्रयोगसँग एकीकृत गर्न सकिन्छ।
CompanyHub मा कसरि शुरू गर्न कठिन छ?
कम्पनी हब प्रयोग गरेर एक्सेलको रूपमा सजिलो छ। तपाईले गर्नु आवश्यक छ तपाईंको खाता सिर्जना गरी सुरु गर्नुहोस्। कुनै पनि संदेहको प्रश्न वा प्रश्नहरू तपाई सधैँ तपाइँको ग्राहक समर्थनमा पुग्न सक्नुहुनेछ।
UTron के हो र यो कसरी काम गर्दछ?
यूट्रोन तपाईंको व्यक्तिगत विकट बूट हो जसले तपाईंलाई सबै बोरिंग कार्यहरू स्वचालित गर्न मद्दत गर्नेछ। केवल बिन्दुमा क्लिक गर्नुहोस् र तपाईले आफ्नो यूट्रोन्स बनाउन सक्नुहुन्छ जुन कोडको एकल रेखा बिना लगभग सबै आफ्नो व्यवसाय प्रक्रियाहरू स्वचालित रूपमा गर्न सक्नुहुन्छ।
के कम्पनी हब मेरो मोबाइल उपकरणमा काम गर्नेछ?
हामी दृढतापूर्वक विश्वास गर्छौं कि मोबाइल-पहिलो संसार हो र हामी आफ्नो डेस्कमा हाम्रो ग्राहकको बिक्रीलाई सीमित गर्न चाहँदैनौँ। Thats why CompanyHub हामीलाई एन्ड्रोइड र आईओएसका लागि मोबाइल अनुप्रयोगहरू निकै सजिलो छ, जुन "बिक्रीमा" बिक्रीका लागि डिजाइन गरिएका छन्। त्यसैले तपाईलाई चाहिएको सबै चीज एक टाढा टाढा हो।
मेरो विभिन्न कार्यालयहरूमा कार्यालयहरू सेटअप छ, यो मेरो लागि यो काम गर्नेछ?
हो, कम्पनी हब तपाईंको लागि एक उत्तम समाधान हुनेछ यदि तपाईंसँग विभिन्न स्थानहरूमा कार्यालयहरू सेट अप छ भने। कम्पनी हबसँग तपाईं निर्णय गर्न सक्नुहुन्छ कुन प्रयोगकर्ताले कुन जानकारी हेर्न सक्दछ। साथै तपाइँ पूर्ण दृश्यता प्राप्त गर्दा तपाईंका सबै टोली सजिलै एक स्थानमा सहयोग गर्न सक्नुहुन्छ। तपाईं केहि मिनेट भित्र अन्तर्दृष्टि रिपोर्ट पनि सिर्जना गर्न सक्नुहुनेछ।
खाता स्थापना गर्न मद्दतको लागि हामीलाई कुनै व्यक्ति हुनेछ?
हो, हाम्रो समर्थन टोली केवल जब तपाईलाई आवश्यक पर्दछ एक सन्देश हुनेछ। जब तपाइँ वा तपाईंको टोलीसँग कुनै संदेह छ वा प्रश्न सोध्छ भने हाम्रो टोली सन्देश / ईमेल र तिनीहरू तपाईंलाई मद्दत गर्न खुसी हुनेछन्। BTW CompanyHub समर्थन टीम एकमात्र कम्पनी हो जसले G100 कोलको उच्च प्रदर्शन CRM स्प्रिंग सूचीमा 2% सन्तुष्टि मूल्याङ्कन गर्यो।
हाम्रो सहयोग टोलीले हाम्रो ग्राहकलाई सहयोग गर्न मन पर्छ
हाम्रा ग्राहकहरूले धेरैलाई प्रेम गरेर गरेका छन् रेटिंग Them 100% G2Crowd मा!
खाता सेटअपमा मद्दत गर्नुहोस्